ड्रिप सिंचाई श्रृंखला FAQ - पाओटिंग Mingwang सिंचाई उपकरण कं, लिमिटेड।
के मलाई ड्रिप सिंचाई को लागी फिल्टर चाहिन्छ?
हो। हरेक सिंचाई प्रणाली को आवश्यकता छ एक छ फिल्टर। कुनै फरक पर्दैन कसरी तपाइँको पानी सफा छ, एक फिल्टर सस्तो बीमा मलबे को लागी तपाइँको प्रवेश मा सुरक्षा को लागी हो सिंचाई प्रणाली। पानी मा साना कणहरु पनि कारण हुन सक्छ ड्रिप emitters clogged हुन.
कुन दिशा चिन्ह रंग र faces्ग अनुहार जब स्थापित?
अनुहार, ताकि पानी आउटलेट अनुहार माटो, बालुवा र झार बाट प्रवेश गर्न बाट बच्न को लागी.
के म उर्वरक पछि मेरो प्रणाली फ्लश गर्न आवश्यक छ?
सधैं फ्लश को उर्वरक पछि प्रणाली ठीक संग तपाइँको रखरखाव को लागी सिंचाई प्रणाली। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जब जैविक प्रयोग गरीन्छ मल.
म कसरी एक ड्रिप सिंचाई प्रणाली फ्लश गर्न सक्छु?
फ्लश को प्रणाली निम्न अनुसार सफा पानी संग: फ्लश पहिलो मुख्य लाइनहरु, त्यसपछि धेरै गुना लाइनहरु र अन्त मा ड्रिप एक पटक मा धेरै लाइनहरु खोलेर लाइनहरु (उदाहरण को लागी: दस लाइनहरु) ताकि पर्याप्त दबाव एक जोरदार प्राप्त गर्न को लागी राखिएको छ फ्लश. फ्लश लाइनहरु को बारे मा १ मिनेट को लागी वा जब सम्म पानी स्पष्ट छ।
ड्रिप टेप र ड्रिप लाइन बीच के फरक छ?
ड्रिप लाइन जस्तै छ ड्रिप टेप कि यो विभिन्न उत्सर्जन दरहरु को समान रूप बाट दूरी अन्तराल मा स्थापित को emitters छ, तर समानताहरु त्यहाँ रोकिन्छ। मन परेन ड्रिप टेप, ड्रिप लाइन लम्बाइ मा समान आकार को पाली ट्यूबिंग को एउटै सीमा सम्म सीमित छ
ड्रिप सिंचाई प्रवाह कसरी गणना गर्ने
(१)GPH द्वारा emitters को संख्या गुणा आफ्नो कुल प्राप्त गर्न ड्रिप सिंचाई प्रवाह दर, यदि तपाइँका सबै emitters एउटै GPH दर छ।
(२)उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ २० emitters छन् कि सबै २ GPH को प्रवाह दर छ, तपाइँको कुल ड्रिप सिंचाई प्रवाह दर ४० GPH (२० emitters x २ GPH = ४० कुल GPH) हो।
ड्रिप टेप emitters माथि वा तल जान्छन्?
जुनसुकै तरीकाले तपाइँ तपाइँको स्थापना गर्न छनौट गर्नुहोस् ड्रिप टेप कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् उत्सर्जन गर्नेहरु अनुहार माथि। यसले बन्द मा फोहोर र मलबे को चुस्ने को कारण clogging कम हुन्छ-तल। अक्सर कभर गर्दै टेप माटो वा गीली घास को मात्र केहि इन्च संग धेरै उपयोगी छ।
ड्रिप टेप कति लामो हुन्छ?
कति लामो हुनेछ ड्रिप टेप अन्तिम? 8-मिल ड्रिप टेप एक पटक प्रयोग गरीन्छ र खारेज गरिन्छ। १० मिलियन टेप सामान्यतया चट्टानी माटो वा overwintering बाली को लागी प्रयोग गरीन्छ। १५-मिल टेप सामान्यतया 3-5 बर्ष को लागी राम्रो छ लामो फिल्टर र नियामक ठीक संग काम गरीरहेको छ।
के म ड्रिप टेप पुनः प्रयोग गर्न सक्छु?
यदि तपाइँ बगैंचामा वर्ष-राउन्ड बढ्दै हुनुहुन्न भने तपाइँ पुन: उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ को टेप अर्को बढ्दो मौसममा। बस सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै फिटिंगहरु लाई धुनुहोस् र राम्ररी माटो र ग्रिट लाई वरपरको नट र बार्ब बाट हटाउनुहोस् ताकि उनीहरु राम्रो तरिकाले अर्को पटक जब तपाइँ उनीहरुलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ।
ड्रिप टेप गाड्न सकिन्छ?
ड्रिप टेप गर्न सक्नुहुन्छ हुन गाडिएको माटो मा छ इन्च गहिरो। ऊ सामान्यतया मात्र उसको दफन गर्दछ टेप जमिनमा लगभग तीन देखि चार इन्च गहिरो।
तपाइँ कसरी एक ड्रिप टेप अनलक गर्नुहुन्छ?
पानी को स्रोत मा गेट भल्भ खोल्नुहोस् वा जब एक पानी पम्प को उपयोग, पानी पम्प खोल्नुहोस् र चलाउनुहोस् सिँचाइ कम्तिमा एक घण्टा को लागी प्रणाली। यो सुनिश्चित गर्दछ कि एसिड-पानी समाधान मुख्य लाइन को माध्यम बाट प्रणाली मा ल्याईन्छ र यो प्रणाली भित्र ब्याक्टेरिया buildups खाली हुनेछ।
के ड्रिप लाइनहरु बन्द हुन्छ?
दुर्भाग्यवश, मा ट्यूबिंग ड्रिप प्रणाली clogged हुन सक्छ खनिज वा जीवाणु निर्माण द्वारा। फ्लश गर्दै प्रणाली कम्तीमा ३ पटक पानी संग सक्छ साना अवरोधहरु हटाउनुहोस् र clogs लाई पहिलो स्थानमा गठन बाट रोक्नुहोस्। यदी तिम्रो प्रणाली साँच्चै बन्द छ, एक एसिड फ्लश आवश्यक हुन सक्छ
म कसरी मेरो सिंचाई प्रणाली अनलक गर्न सक्छु?
१।पहिले स्प्रिंकलर को बारी सुनिश्चित गर्नुहोस् प्रणाली घटनाहरु बाट बच्न।
२।अर्को तपाइँ स्प्रिंकलर नोजल र टाउको को सबै हटाउन को लागी आवश्यक छ।
३।त्यसपछि पानी खोल्नुहोस् र यसलाई चल्न दिनुहोस् जब सम्म पानी प्रत्येक टाउको बाट खोला बाहिर छिर्ने भित्र कुनै मलबे बाहिर जान दिईन्छ। प्रणालीहरु
ड्रिपलाइन र ड्रिप टेप बीच के फरक छ?
कुन राम्रो ड्रिप टेप वा ड्रिप लाइन हो?
जब लामो लम्बाइ आवश्यक छ, जस्तै खेती वा लामो आवासीय अनुप्रयोगहरु मा, ड्रिप टेप अक्सर समाधान को लागी जान्छ। ड्रिप टेप अक्सर कम दबाव अनुप्रयोगहरु मा प्रयोग गरीन्छ, 8-15 PSI मा इष्टतम काम गरीरहेको छ। जबकि ड्रिप टेप पाली ट्यूबिंग र भन्दा लामो लम्बाई मा प्रयोग गर्न सकिन्छ ड्रिप लाइन, यो पूर्णतया सीमा बिना छैन